सहारा सहकारी संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्यको निःशुल्क औषधि उपचार गर्दै
Sun, Feb 23, 2020 at 1:38pm
शिल्पा शेट्टी बनिन् छोरीकी आमा #आहा खबर# सीले आकस्मिक भिडियो सम्मेलनमा भनेः कोरोनाभाइरस हालसम्मकै ठूलो स्वास्थ्य संकटकाल #आहा खबर# वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन #आहा खबर# ७० करोड घुस काण्डमा मुछिएका गोकुल बाँस्कोटाको कति छ सम्पत्ति ? #आहा खबर# सरकारले विश्वास गुमाउँदै गएको पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको आरोप #आहा खबर# कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सहयोग गरेकोमा बिल गेट्सलाई चिनियाँ राष्ट्रपतिको धन्यवाद #आहा खबर# ‘सेन्टी भाइरस’को एक दिने कमाई १ करोड १२ लाख #आहा खबर# बाँस्कोटा अडियो प्रकरणबारे प्रचण्डले मुख खोले - गल्ती गर्ने कसैलाई पार्टीले संरक्षण गर्दैन #आहा खबर# आज पनि हल्का बर्षा र हिमपातकाे सम्भावना #आहा खबर# कोटश्वरको जाम कम गर्न सरकारले ल्यायाे यस्ताे उपाय #आहा खबर# फेडेररले फ्रेन्च ओपन खेल्न नसक्ने #आहा खबर# ओली नेतृत्वको सरकार काण्डै–काण्डको घेरामा #आहा खबर# चीनको छिङहाई प्रान्तका कोरोना सङ्क्रमित सवै विरामी घर फिर्ता #आहा खबर# इपिएलमा पोखराको ओपनिङमा मुन्से र गेल ? #आहा खबर# अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प पहिलोपटक सिङ्गो परिवारसहित भारत भ्रमणमा #आहा खबर#
सहकारीले आगामी २०८० सालदेखि सम्पूर्ण शेयर सदस्यको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी
बिहिवार, २१ आषाढ २०७५,	आहाखबर	2.71K
सुरुङ्गा, झापा, २१ असार
सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोडले ४४५ जनाको निःशुल्क उपचार गरेको छ ।
आफ्ना शेयर सदस्यको निःशुल्क औषधिउपचार गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित सहकारीले सञ्चालन गरेको जीवन बरदान कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरुको निःशुल्क औषधि उपचार गरेको हो ।
सहकारीका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रकुमार गिरीका अनुसार सहकारीको आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा रु ७२ लाख सात हजार खर्च भएको छ । दुईवटा आयुर्वेद औषधालयसहित ३३ वटा अस्पतालबाट सहकारीले उक्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सहकारीका शेयर सदस्य बिरामी परे शल्यक्रिया, एनएसथेसिया पोष्टअप-एचडियू, आइसियु-एनआइसियूसम्मको खर्च सहकारीले व्यहोर्ने गरेको सहकारीका अध्यक्ष ताराप्रसाद सञ्जेलले बताए ।
फेमली हेल्थ नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सहकारीले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सो कार्यक्रमबाट प्रदेश नं १ का सहाराका सम्पूर्ण शेयर सदस्य लाभान्वित भएका छन् । सहकारीले आगामी २०८० सालदेखि सम्पूर्ण शेयर सदस्यको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने लक्ष्य लिएको सहकारीका कार्यकारी निर्देशक गिरीले बताए ।
सहकारीमा एक लाख ३० हजार ८०१ शेयर सदस्य छन् । संस्थाको कूल सम्पति दायित्व रु छ अर्ब ७९ करोड ३९ लाख २१ हजार रहेको सहकारीका अध्यक्ष सञ्जेलले बताए । सहकारीले सञ्जीवनी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दैआएको छ । सहकारीले आफ्ना शेयर सदस्यलाई रक्तचाप र मधुमेहको औषधिमा ५० प्रतिशत छुट दिँदै आएको छ । “यस वर्षबाट थाइराइडको समेत औषधि उपलब्ध गराउँछौँ,” गिरीले भने । आगामी दिनमा संस्थाले १० वटा जटिल रोगको औषधिमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।